တန်ချိန် ၅၀၀၀၀ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း - YiZheng Heavy Machinery Co. , Ltd.
စိမ်းလန်းသောစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြေကြီးညစ်ညမ်းမှုပြtheနာကို ဦး စွာဖြေရှင်းရမည်။ မြေဆီလွှာတွင်အများအားဖြင့်ပြproblemsနာများမှာမြေဆီလွှာကိုကျုံ့ခြင်း၊ ဓာတ်သတ္တုအဟာရအချိုးညီမျှမှု၊ အော်ဂဲနစ်ပါဝင်မှုနိမ့်ကျခြင်း၊ မြေတိမ်မြေသြဇာကောင်းမွန်ခြင်း၊ မြေဆီလွှာစိုစွတ်ခြင်း၊ မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ မြေဆီလွှာကိုတိုးတက်စေရန်လိုအပ်သည်။ မြေဆီလွှာတွင်အော်ဂဲနစ်ပါ ၀ င်မှုပါဝင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်၍ မြေဆီလွှာတွင်လုံးလေးများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောဒြပ်စင်များပိုမိုများပြားလာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများကိုအပြီးသတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သည်။ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာများကိုမီသိန်းအညစ်အကြေးများ၊ စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကြက်မြေ waste ဇာနှင့်မြူနီစီပယ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုစီးပွားဖြစ်တန်ဖိုးရှိစီးပွားဖြစ်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းမပြုမီထပ်မံပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုစည်းစိမ်ဥစ္စာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်လုံးဝကျိုးနပ်ပါသည်။
နှစ်စဉ်တန်ချိန် ၅၀,၀၀၀ တန်ထုတ်လုပ်သည့်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအသစ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုစိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကြက်၊ မြေ s ဇာများနှင့်မြို့ပြစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအော်ဂဲနစ်ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတစ်ခုလုံးသည်မတူညီသောအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်ပြောင်းလဲရုံသာမကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းရရှိစေသည်။
အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်အဓိကအားဖြင့် hopper နှင့် feeder၊ drum granulator၊ dryer, roller ဆန်ခါစက်၊ ပုံးတစ်ပုံး၊ belt conveyor၊ packing machine နှင့်အခြားအရန်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းအသစ်သည်အမျိုးမျိုးသောအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ၊ အထူးသဖြင့်ကောက်ရိုး၊ အရက်အကြွင်းအကျန်များ၊ ဘက်တီးရီးယားအကြွင်းအကျန်များ၊ အဆီဓာတ်များ၊ ၎င်းကို humic acid နှင့်မိလ္လာအနည်အနှစ်များကုသရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၁။ စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း - ကောက်ရိုး၊ ပဲကျန်ရှိနေမှု၊
၂။ တိရိစ္ဆာန်အညစ်အကြေး - ကြက်မွေးမြူရေး၊ ငါးစျေးကွက်မှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ ကျွဲ၊ ဝက်၊ သိုး၊ ကြက်၊ ဘဲ၊ ငန်း၊ ဆိတ်၊
၃။ စက်မှုစွန့်ပစ်ပစ္စည်း - အရက်များအကြွင်းအကျန်၊ ရှလကာရည်ကျန်ရှိသောပီလောပီနံအကြွင်းအကျန်များ၊ သကြားအကြွင်းအကျန်များ၊
4. အိမ်ထောင်စုစွန့်ပစ်ပစ္စည်း - အစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ အမြစ်များနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အရွက်များစသည်ဖြင့်
၅။ ရွှံ့နွံ - မြစ်များ၊
အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင် dumper, mixer, crusher, granulator, dryer, cooler, packet machine စသည်တို့ပါဝင်သည်။
၂။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရဓာတ်မြေသြဇာ၏အချင်းကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်ထုတ်လုပ်သောဓာတ်မြေသြဇာအမျိုးအစားများတွင်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအသစ်များ၊ disk granulators၊ ပြားချပ်ချပ် granulators, drum granulators စသည်တို့ပါဝင်သည်။ မတူညီသောပုံစံများကိုထုတ်လုပ်ရန်ကွဲပြားခြားနားသော granulators ကိုရွေးချယ်ပါ။
3. ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်တိရိစ္ဆာန်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ ကစော်ဖောက်ခြင်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစသည်တို့ကိုအမျိုးမျိုးသောကုန်ကြမ်းများကိုကုသနိုင်သည်။
4. မြင့်မားသောအလိုအလျောက်နှင့်မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကို။ ပါဝင်ပစ္စည်းများစနစ်နှင့်ထုပ်ပိုးစက်ကိုကွန်ပျူတာများနှင့်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်သည်။
၅။ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးတည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှု၊ အလိုအလျောက်မြင့်မားပြီးတာ ၀ န်သက်တမ်းရှည်သည်။ ဓာတ်မြေသြဇာစက်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သည့်အခါသုံးစွဲသူ၏အတွေ့အကြုံကိုကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝထည့်တွက်ပါသည်။
ပြန်လည်အသုံးပြုမွေးမြူရေးနှင့်ကြက်ဘဲနှင့်အခြားကုန်ကြမ်းကစော်ဖောက်ခြင်းintoရိယာသို့တိုက်ရိုက်ဝင်ကြ၏။ တစ်နှစ်တွင်အချဉ်ဖောက်ခြင်း၊ ဒုတိယအိုမင်းခြင်းနှင့်စုပုံခြင်းပြီးနောက်မွေးမြူရေးနှင့်ကြက်အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားပစ်သည်။ ဤအဆင့်တွင်အချဉ်ဖောက်သည့်ဘက်တီးရီးယားများကိုထည့်သွင်း။ ကြိတ်ခွဲထားသောအမှုန်များ၏အရွယ်အစားလိုအပ်ချက်များသည် granulation ထုတ်လုပ်မှု၏အသေးစိတ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက်ကြမ်းမျှင်အမျှင်များပြိုကွဲစေနိုင်သည်။ အပူချိန်အလွန်အကျွံကာကွယ်ခြင်းနှင့်အဏုဇီဝသက်ရှိများနှင့်အင်ဇိုင်းများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတားဆီးနိုင်ရန်အတွက်ကစော်ဖောက်ခြင်းအတွင်းကုန်ကြမ်းများ၏အပူချိန်ကိုတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသင့်သည်။ လမ်းလျှောက်သောလှန်စက်များနှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်လှန်စက်များသည်အက်တမ်များလှန်လှောခြင်း၊
၀ ယ်ယူသူများကအလယ်အလတ်အိုမင်းခြင်းနှင့်စုပုံခြင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးသောအချဉ်ဖောက်သည့်ကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၏အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော semi-wet material crusher ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
granul ခြင်းမပြုမီ၊ ကုန်ကြမ်း၏အစိုဓာတ်သည် ၂၅% ကျော်ပါကအချို့သောစိုထိုင်းဆနှင့်အမှုန်အရွယ်အစားနှင့်အတူစည်ခြောက်ခြောက်ခြင်းကိုခြောက်သွေ့ရန်အတွက်စည်ခြောက်စက်များအသုံးပြုပါကရေသည် ၂၅% ထက်နည်းရမည်။
အသစ်သောအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ granule စက်ကိုပိုးမွှားများဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက်ကုန်ကြမ်းများကိုဘောလုံးများအဖြစ်ခွဲထုတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဒီ granulator ကိုအသုံးပြု။ သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများ၏ရှင်သန်မှုနှုန်း 90% ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။
အမှုန်အမှုန်များ၏အစိုဓာတ်သည် ၁၅% မှ ၂၀% ထိရှိပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ပစ်မှတ်ထက်ကျော်လွန်သည်။ ဓာတ်မြေသြဇာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သိုလှောင်ရန်လွယ်ကူစေရန်ခြောက်သွေ့စက်များလိုအပ်သည်။
ခြောက်သွေ့သောကုန်ပစ္စည်းသည်အေးစက်ကိုခါးပတ်သယ်ဆောင်ဖြင့်ဖြတ်သန်းသည်။ အအေးသည်ကျန်ရှိနေသောအပူကိုအပြည့်အ ၀ ဖယ်ရှားရန်လေအေးပေးစက်ဖြင့်အအေးပေးသည့်အပူထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုပြီးအမှုန်များ၏ရေပါဝင်မှုကိုထပ်မံလျှော့ချပေးသည်။
၉ ။ ထုပ်ပိုးခြင်း
အချောထုတ်ကုန်တစ်ခါးပတ်ပေါ်ကိုမှတဆင့်ထုပ်ပိုးစက်ထဲသို့ဝင်။ ချောထုတ်ကုန်အရေအတွက်နှင့်အလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးထွက်သယ်ဆောင်။ ထုပ်ပိုးစက်တွင်ကျယ်ပြန့်သောအရေအတွက်နှင့်တိကျမှုရှိသည်။ ၎င်းကိုသယ်ဆောင်စက်နှင့်ဓာတ်လှေကားကောင်တာဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ စက်တစ်ခုသည်စွယ်စုံနှင့်ထိရောက်မှုရှိသည်။ ထုပ်ပိုးရန်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကွဲပြားသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်အသုံးပြုရန်။